Gudoomiyaha Dallada Sonyo Oo Xilkii U Kala Wareejiyay Agaasimaha Cusub ee Daladaasi Iyo Agaasinkii Ka Horeeyey | Berberanews.com
Home WARARKA Gudoomiyaha Dallada Sonyo Oo Xilkii U Kala Wareejiyay Agaasimaha Cusub ee Daladaasi...
Gudoomiyaha Dallada Sonyo Oo Xilkii U Kala Wareejiyay Agaasimaha Cusub ee Daladaasi Iyo Agaasinkii Ka Horeeyey
#Xil Wareejintii #Agaasimaha #SONYO:
Dhalinyaradu waa mustaqbalka dalka & horumariyayaasha qaranka ee maanta & berri, sababtu waxa ay tahay; da’da ay ku sugan yihiin waxay rumayn karaan doonistooda, waxa ay leeyihiin niyad samaan wax qabad badan keeni karta, waxa ay hayaan tamar aan xadi lahayn & han weyni baaxad leh. Waxa ku duugan awood ay isbedel weyn ku samayn karaan. Dhalinyaradu waa hantida shaqaale ee horumar lagu samayn karo, waa isbedel abuurayaashada bulshada ee dhaqan & dhaqaale ee horseedi kara ikhtiraacyo cusub & horumar dunnida la jaan qaadi kara. Haddii sidda ay tahay looga faaiideeye awoodani waxa ay bulshada ku hoggamin karaan jidka horumarka & isbedelka.
Ururada bulsho ee ay SONYO ka mid tahay, waxa loogu talo galay in ay dhalinyaradu ku tabo-barato, in ay noqoto madal isku xidha dhalinyarada iyo bulshada, in ay noqoto madal ay ka soo baxaan hoggaamiyayaasha bulshadu & in ay noqoto madal bulshada tusta awooda hoggaamineed ee dhalinyarada.
Bulsho ahaan SONYO waxa aannu ka rabnaa in ay ka soo baxaan Hoggaamiyayaal dalka waxtara ee aan qayb ka noqon burburintiisa, hoggaamiyayaal sawir qurux badan ka bixinaya dhalinyarada Somaliland. Waxa aannu rabnaa in ay SONYO ka soo baxaan hoggaamiyayaal ay ka go’an tahay la dagaalanka MUSUQ-MAASUQA, Qaraabo kiilka, hanti urursiga & fal kasta oo xun oo ay dhalinyarada & bulshaduba dhibsato. Waxa aynu SONYO ka rabnaa in ay ka soo baxaan hoggaamiyayaal bulshadu u aydo u riyaaqdo ee aysan qoomameyn. SONYO waxa aynu ka rabnaa in ay ka soo baxan hoggaamiyayaal aragti dheer oo ku mashquul ah rumaynta mabaa’diida horumarineed ee dalka.
Sannadkii 2004tii ayaa SONYO iigu dambeysay, waa wakhtiga aan is odhan karo dhalinyarnimo ayaad ku dhawayd (15 sanno ka hor). SONYO waxa aynu rabnaa in dhalinyarada ay gaar u noqoto oo ay noqoto madal ay dhalinyarada reer Somaliland ku soo hirato, kuna soo tabo barato – yuusan qof dhaafay da’da dhalinyaradnimadu ku mashquulin arrimaha SONYO, inta da’da dhalinyarnimo ku jirtaa ha ku tabo-barato oo ha ku diyaar garowdo. Kooxaha sidayda waa hore ka huleelay da’adii dhalinyaranimo waxa muhiim ah in ay arrimaha SONYO faraha kala baxaan “40 ama 50 jirka ku mashquulsan arrimaha SONYO waxa quman in uu xisbiyada siyaasadda ku biiro amaba uu furto xisbi siyaasadeed si dhalinyaradu ay u helaan madal iyaga ku haboon oo siyaasad & danno gaar ah ka madax banaan”.
Agaasimaha Xilka Warejinaya Oom Miigane waan ku amaanayaa waxqabadka balaadhan – Agaasimaha cusubna Abdihamid Mohamed Omer waa aan u duceynayaa, waxaanan ka codsanayaa in uu noqdo hayin SONYO halkaa la soo gaadhsiiyay kor uga qaada.
Ugu dambeyn, gollaha sarre ee dallada SONYO, Gudoomiyaha & Agaasimaha cusub ba waxa aannu bulsho ahaan ka codsanaynaa in ay diyaariyaan doorasho qurux badan oo lagaga daydo wakhtiga ay gaadho doorashada hoggaanka SONYO.
Previous articleDigniin- Gudoomiyaha Gobolka Sool Ayaa Shacabka Gobolada Bari Uga Digay Inay Ka Taxadaraan Dhibka Kasoo Gaadhi Kara Khasaaraha Roobab Dabaylo Wata Oo Kusoo Wajahan Deegaanka
Next articleSheekh Dirir; Waxyaalaha DHAAWACA WALAATINIMADA ISLAAMKA